राति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/राति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ?
3,4582minutes read
काठमाडौँ । मुखको र्याल् भोजनको पाचन प्रणलीको लागी महत्वपूर्ण मानिन्छ । र्‍याल मा एमाइलेज नामक पाचक पाइन्छ जोसले भोजनम उपस्थित स्टार्चलाई सर्करामा बदलदिन्छ ।
हेर्दै रसिलो, झरिलो, स्वादिलो खानेकुरा देख्नै हुन्न, हाम्रो मुखमा पानी आइहाल्छ ।
आफूलाई मन परेको खानेकुरा देख्नासाथ हामीमध्ये धेरैको मुखबाट पानी निस्कने गर्छ । मिठो खानेकुरा वा अमिलो, पिरो खानेकुरा देख्दा मुखबाट पानी आउनु अनौठो कुरा पनि भएन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो आफैमा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हो, जसले जुनसुकै बेला समस्या निम्त्याउन सक्छ । यो स्थितिलाई मेडिकल भाषामा हाइपर सालिवेशन भन्ने गरिन्छ । धेरै जसो अवस्थामा यो समस्या अस्थाई हुने गर्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हुनसक्दछ । जसका कारण मुखबाट निस्केको र्‍याल रोक्नमा व्यक्ति असमर्थ हुन्छ ।
यो समस्याले गम्भीर रोगको संकेत समेत गर्ने हुदाँ यदी कुनै व्यक्तिमा र्‍याल चुहिने समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
र्‍याल ग्रन्थीमा कुनै किसिमको समस्या भएमा पनि र्‍याल ग्रन्थी खराब हुनसक्छ । जसका कारण उक्त ग्रन्थीमा अधिक र्‍याल जम्मा भई मुखमा पानी बग्ने गर्छ ।
अंगारले पनि चम्काउछ भाग्य, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
यसरी गर्नुहोस् लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पुजा, हुनेछ तत्काल धनलाभ
यी २० मध्ये कुनै एक मात्र संकेत देखियो भने सोच्नुहोस्, तपाई चाँडै धनी बन्दै हुनुहुन्छ ?
फिटकिरीले रातारात बदलिदिन सक्छ तपाईको भाग्य, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग